Tanneri Voice – Page 15 – Tanneri Chaso
के हुने हो थाहा छैन ??
Tanneri Chaso	March 6, 2012
अन्तत कलंकीमा आकाशे पुल बन्यो
शान्तिसुरक्षा दिने प्रहरीले त ग्यास बाढ्न पो लागेछ त !
Tanneri Chaso	February 15, 2012
अर्जुन दाहाल, दोलखा
प्रहरीको कार्यालयमा मानिसहरु आफ्ना वियिभन्न समस्या लिएर जाने गर्छन । वा आफुलाई कुनै अपराधिक कृयाकलापको आरोप लागेमा प्रहरि कार्यालय धाउने सर्वसाधारण हिजो चरिकोटको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अलि फरक कामले जम्मा भएका थिए । ग्यास लिनका लागि जिल्लामा ग्यासको चरम अभाव भएर विक्रि गरिने केन्द्रमा उपभोक्ताको भिड बढेपछि प्रहरी कार्यालय परिसरबाट नै ग्यास वितरण गरिएको हो ।
Tanneri Chaso	February 14, 2012
हरेक बिहान दैलोमा आइपुग्ने पत्रिकामा घृणामा समाचार छापिन्छन् । दहेजको नाममा मट्टितेल छर्केर जलाइएका युवती, श्रीमानबाट मारिएका श्रीमती, श्रीमतीबाट पिडित श्रीमान, बाबुले भेलमा फालिदिएका सन्तान, बोक्सीको नाममा यातना दिइएका महिला, पानीको धारा छुँदा पिटिएका दलित- हामीलाई यस्ता समाचार पढ्न नपरोस्जस्तै लाग्छ । समाजजस्तो छ, त्यस्तै समाचार आउने न हो । अँध्यारोले छोपिदै गएको युगलाई एउटै कुराले उज्यालो बनाउँछ, त्यो हो– प्रेम । प्रेममाथि मान्छेका अभिलाषा, ठूला सपना, छड्केबाटोको सफलता, वैरभाव कुन्ठाजस्ता कुराले हमला गरिहेका छन् तर प्रेम कहिकतै हरियो रंग भएर बसेकै छ – सुक्दै गएको दुवोको जरातिर बचेको हरियोझैँ । भन्नेहरु भन्लान् प्रेम देखाउँनलाई भ्यालेन्टाइनजस्तो कुनै दिन चाहिदैन
अभियानमा छ तन्नेरी चासो
Tanneri Chaso	November 11, 2010
छलफल / बहस
Tanneri Chaso	November 10, 2010
छलफल गर्दै तन्नेरी चासोका अभियन्ता
Tanneri Chaso	October 16, 2010
Tanneri Chaso	June 11, 2010